म्याउँ–म्याउँ किन गर्छ बिरालाे ?
बिरालो किन म्याउँ गर्छ ? प्रश्न सामान्य छ, तर जवाफ सामान्य छैन । जब बिरालोलाई हामी मायाले चलाउँछौँ तब ऊ म्याउँ गरेर आफ्नो खुसी व्यक्त गर्छ । तर, बिरालोले म्याउँ गर्नुको रहस्य यति मात्रै होइन । पहिले मानिसलाई लाग्थ्यो...
फलफूल–सब्जी कति खाने ? डब्लूएचओकाे मापदण्ड यस्ताे छ
एजेन्सी– यदि तपाईं फलफूल–सब्जी कम सेवन गर्नुहुन्छ भने सावधान ! किनकि यसो गर्नाले तपाई कुपोषणको सिकार हुँदै हुनुहुन्छ । यसको खुलासा भारतका एक वैज्ञानिक रिपोर्टमा प्रकाशित भएको छ । फल तथा सब्जी भिटामिन एवं माइक्रो न्युट्रियन्टको राम्रो स्रोत हो ।...
कथा आलुको र यो किन महत्वपूर्ण छ ?
सन् १९५७ मा फ्रेन्च दार्शनिक तथा साहित्यिक आलोचक रोलाँ बार्थले चिप्सलाई देशभक्तको संज्ञा दिँदा ठूलो चर्चा भएको थियो । एक शताब्दि पहिले आलुमा लागेको एउटा रोगकै कारण आयरल्यान्डमा झन्डै आधा जनसंख्याले ज्यान गुमाएका थिए । अब त चीन, भारत, रुस...
साहरुख जेल गएकाे त्याे घटना
२ घण्टा अघि फरक धार
एजेन्सी– बलिउड अभिनेता साहरुख खान केहीअघि अमेरिकी टिभी होस्ट डेभिड लेटरम्यानको सोमा पुगेका थिए । त्यो कार्यक्रममा उनले आफ्ना निकै धेरै कुराहरु खोले । उनले आफ्नो जीवनका विभिन्न विषयमा बोल्दा एउटा नयाँ कुरा पनि बताए जुन यसअघि बाहिर आएको थिएन...
खुर्सानीले रोक्छ फोक्सोको क्यान्सर !
ज्यादा अमिलो, पिरो, चिल्लो खाना स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । तर, नियमित केही मात्रामा खुर्सानी सेवनका भने अनेक फाइदा छन् । खुर्सानीले खानाको स्वाद मात्र बढाउँदैन, शरीरको वजन घटाउनेदेखि मुटुमम्बन्धी रोग र पिनासमा यो लाभदायक छ । हरियो खुर्सानीले पुरुषमा...
धनी बन्न अम्बानीका सात सुत्र
धनी बन्ने रहर सबैलाई हुन्छ । तर, केही व्यक्तिले मात्र आफ्नो त्यो रहर पूरा गर्न सक्छन् । तीमध्येका एक हुन्, भारतका धनाढ्य मुकेश अम्बानी । मिहिनेत र लगनशीलताका कारण उनी भारतमा प्रेरणाको स्रोत नै बन्न पुगे । उनी कसरी धनी...
सिरानीमुनि के राखेर सुत्ने ?
जीवनमा यदि लामो समयसम्म निराशा छाएको छ र आफू असफल भइरहेको छु भन्ने लाग्छ भने केही वास्तुसम्बन्धी टिप्सलाई मान्दा सफलता मिल्न सक्छ । सफलता मिल्ने बाटो भनेको वास्तुमाथिको विश्वास त होइन, तर यसले मनोबल बढाउने काम भने पक्कै गर्छ ।...
ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? होसियार हुनुहोस्
एजेन्सी– अहिलेको जमानमा मोबाइलको प्रयोग जरुरतभन्दा पनि अगाडि बढिसकेको छ । केही अघिसम्म फोन गर्न मात्र प्रयोग हुने मोबाइल अब जीवनका अनेक हिस्साहरुलाई समेटेर अगाडि बढिरहेको छ । हामी सुतेर उठ्दा चाहिने अलार्म होस् या बजारमा केही किनेर पैसा तिर्न...
यसकारण नुहाउने पानीमा नुन मिसाउनुस्
नुनविना हाम्रो छाक टर्न मुस्किल छ । परिकार जुनसुकै होस्, रेसिपीमा एउटा नाम अनिवार्यजस्तै हुन्छ– नुन । स्वाद त भैहाल्यो, स्वास्थ्यका लागि पनि नुन उत्तिकै आवश्यक छ । केही दिन नुन नखाँदा रगतमा सोडियमको मात्रा घट्न थाल्छ । त्यसले अनेक...
‘नमरेर ठिकै गरें भन्ने लाग्छ’
मान्छे एकपटक जन्मछ । मर्छ पनि एकैपटक । तर जीवनमा उसले बाँच्ने अवतार भने एक होइन, अनेक हुन्छन् । सत्य हो ! कुनै अवतारले जीवनभर गौरवको अनुभूति दिलाउँछन् । सम्झँदा पनि सन्तुष्टिको श्वास फेर्न सकिन्छ । तर कुनै त यस्ता...
भारतमा कोरोना खोप अभियानको दोश्रो दिनः बिरामीमा देखि थाले यस्ता साइड इफेक्ट
२ घण्टा अघि रातोपाटी
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरस खोपको साइट इफेक्ट देखिन थालेको छ । शनिबारदेखि केही क्षेत्रमा दिन थालिएको खोपबाट साइट इफेक्ट देखिन थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यामहरुले जनाएका छन् । आइतबार भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कोरोना खोप दिन थालेको...
कलेजाे गडबढ भएकाे संकेत मिल्छ हत्केलाबाटै !
हाम्रो कलेजो हाम्रो शरीरका लागि निकै महत्वपूर्ण अंग हो । त्यसैले यसको स्वास्थ्यबारे हामी निकै सचेत हुनुपर्छ । तल दिइएका सात लक्षण देखिए कलेजोबारे समयमा नै सचेत हुनुपर्छः चिलाइरहने छाला हाम्रो छाला अत्यधिक चिलायो भने हामीले बुझ्नु पर्छ, कलेजोमा...
खाली पेटमा बेसार–पानी पिउनुका फाइदै–फइदा
स्वास्थ्यका लागि बेसारका अनेक फाइदा छन् । अक्सर दूध–बेसारको चर्चा हुन्छ । दूधमा बेसार राखेर सेवन गर्दा जिउको दुखाइ कम हुन्छ, शरीरमा स्फूर्ति जाग्छ । तर, तातो पानीमा बेसार राखेर सेवन गर्नुका अझ धेरै फाइदा छन् । बिहानै उठेर बेसार–पानी...
चिनियाँ राष्ट्रपतिले भेटिन् राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीलाई, गोप्य राखियो भेटघाट
३ घण्टा अघि फरक धार
देशमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले फेरि आफ्नो सक्रियता बढाएकी छिन् । यसअघि पनि नेकपामा विवाद देखिँदा होउले बारम्बार नेकपाका नेताहरुलाई भेट्ने गर्थिन् । यसपटक उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेकी छिन् । ...
भारतमा कोरोना भ्याक्सिन लगाएका ४ जना गम्भीर
भारतमा शनिबारबाट पूरै देशमा कोरोनाभाइरस भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरिएको छ । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार दोस्रो दिन आइतबार २ लाख २४ हजार ३ सय १ जनालाई कोरोना भ्याक्सिन लगाइएको छ । यसमा अहिलेसम्म ४ सय ४७ जनालाई नराम्रो असर...
रूसी विपक्षी नेता नाभाल्नी जर्मनीमा उपचारपछि स्वदेश फिर्ता
३ घण्टा अघि रातोपाटी
एजेन्सी । रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नी उपचारपछि स्वदेश फर्किएका छन् । उनी जर्मनीको राजधानी बर्लिनबाट नियमित उडानमार्फत् रूसी राजधानी मस्को फिर्ता भएका हुन् । गत अगष्टमा रूसकै ओम्स्कबाट मस्को जाने विमानमा रहेका समय विमानमा नै अकस्मात विरामी परेका नाभाल्नीलाई...
देखाउने काम माछापालन र मनि ट्रान्सफर, मुख्य काम ठगी
काठमाडौं । ललितपुरको सानेपा बस्ने सञ्जय (नाम परिवर्तन) स्नातक पढ्दै छन् । फेसवुकबाट सम्पर्क भएका एकजना विदेशीले अमेरिकबाट उनलाई आइफोन प्रोम्याक्स–११ पठाउँदै थिए । १ लाख ६२ हजार पर्ने प्रोम्याक्स ७५ हजारमा कार्गोबाट आउँदै थियो, उनी खुसी थिए । पुस...
यी हुन् संसारका सबभन्दा खतरनाक सडकहरू
४ घण्टा अघि लोकान्तर
यहाँ हामी संसारका खतरनाक सडकको चर्चा गर्दैछौं । यी सडकबाट गुज्रिँदा मुटुको ढुकढुकी बढ्छ । रोमाञ्च मन पराउने मानिसलाई यी सडकहरू पर्फेक्ट छन् । स्किपर्स क्यान्यन रोड, न्युजील्यान्ड घुमाउरो रूटका लागि प्रसिद्ध यो सडकमा ड्राइभिङका लागि विशेष अनुमति लिनुपर्छ...
काठमाडौं— अनारलाई सबभन्दा स्वास्थ्यवर्द्धक र पोषक तत्त्वले भरपूर फल मानिन्छ । स्वाद पनि यसको गजबको हुन्छ । टन्नै फाइबर, भिटामिन सी लगायतका तत्त्व हुनाले अनार दिनदिनै खानु राम्रो हुन्छ । यसले भुँडी लाग्न दिँदैन । अनारको जुस पिउनु अत्यन्त लाभदायक...
यस्ता छन् मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउनुका फाइदा
काठमाडौं — पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै जरूरी कुरा हो किनकि यसले शरीरको विकासमा धेरै मद्दत गर्छ । अनि मरिचले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गरिदिन्छ । मनतातो पानीमा मरिच हालेर पिउँदा त झन् फाइदै फाइदा हुन्छ । रक्ताल्पता मनतातो पानीमा...
सुडान झडपमा कम्तीमा ४८ व्यक्तिको मृत्यु, ९७ जना घाइते
४ घण्टा अघि रातोपाटी
एजेन्सी । सुडानको पश्चिमी डार्फर राज्यको राजधानी एल जेनिनामा सशस्त्र मिलिशियाद्वारा गरिएको आक्रमणमा कम्तिमा ४८ व्यक्तिको मृत्यु भएको सुडानी राज्य सञ्चालित समाचार संस्था (सुना न्यूज एजेन्सी) ले आइतबार जानकारी गराएको छ । उक्त आक्रमणमा कम्तीमा ९७ व्यक्ति घाइते भएका सुनाले...
चीनको खानीमा फसेका श्रमिक ६ दिनपछि जीवितै रहेको सङ्केत भेटियो
एजेन्सी । पूर्वी चीनको भूमिगत खानीमा जनवरी १० मा फसेका २२ श्रमिक खानीभित्र जीवित नै रहेकोे लक्षण भेटिएको उद्धारकर्ताहरूलाई उद्धृत गरी चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । खानी भत्किएर पुरिएका उनीहरू एक हप्ता पछि खानीमा जीवित रहेका लक्षणहरू फेला...
[भर्खरै] चर्चित पप म्युजिसियन स्पेक्टरको मृत्यु
४ घण्टा अघि फरक धार
म्युजिक निर्माता तथा हार्वे फिलिप स्पेक्टरको मृत्यु भएको छ । ८१ वर्षका स्पेक्टर वाल अफ साउन्डका कारण विश्वभर चर्चित थिए । उनले वाल अफ साउन्ड विकास गरेका हुन् । यसलाई संगीत निर्माणको फर्मुलाका रुपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले पनि स्पेक्टरलाई...
बालकृष्ण समको भत्केको जन्मघर ब्युँत्याउँदै गायक लोचन रिजाल
४ घण्टा अघि सेतोपाटी
२०७२ को महाभूकम्पमा धनजनसहित नेपालका महत्वपूर्ण भवन र सम्पदामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये एक थियो, नाट्य शिरोमणि बालकृष्ण समको ज्ञानेश्वरस्थित जन्मघर, समर निकुञ्ज। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले समको ज्ञानेश्वरस्थित उक्त घर संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ। आइतबार विश्वविद्यालयका...